लकडाउन गर्ने तयारीमा सरकार ! – हाम्रो देश
लकडाउन गर्ने तयारीमा सरकार !
काठमाडौँ : सरकारले एक सातापछि लकडाउन गर्ने तयारी गरेको छ । जनस्वास्थ्यका नयाँ मा’पदण्ड जारी गर्ने तयारीसँगै सरकारले लकडाउन गर्न लागेको हो । कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएको र यसले स्वास्थ्य जो’खिम नि’म्त्याएको ठहर गर्दै सरकारले जनस्वास्थ्यका नयाँ मापदण्ड जारी गर्ने भएको हो ।